« HEC Paris- Bernard Ramanantsoa » : ho fantatra ny 30 septambra ny hahazo ny loka | NewsMada
« HEC Paris- Bernard Ramanantsoa » : ho fantatra ny 30 septambra ny hahazo ny loka
Mifototra amin’ny fahaiza-mifaninana ny hatsaran’ny kolontsaina sy ny fahamendrehana ny fifaninanana loka “Amboara HEC Paris-Bernard Ramanantsoa” natao ho an’ny orinasa. Ho fantatra rahampitso 30 septambra ny valin’ny fifaninanana hahazo ny loka.
Voakasik’ireo masontsivana ireo ny fomba fiasan’ny orinasa. Maromaro ny orinasa nandray anjara. Ho an’ny Smartella sarl, misehatra amin’ny fitantanana mpiasa, nandray anjara amin’ny fifaninanana izy ireo, ary nisafidy ny sokajy “mpampiasa mendrika indrindra”. Antony nandraisan’ny orinasa RDJ anjara ny hahalalan’ny mpanjifa azy bebe kokoa eo amin’ny tsena. Toraka izany koa ny orinasa Lexel juridique & fiscal. Manamafy ireo voalaza ireo ny Gassy Tour, fa fantatray ny lanja sy lazan’ny HEC Paris, ary mahaliana ny zavatra ataony, hamantarana raha tsara na tsia ny asa ataonay.
Mikarakara ity fifaninanana ity ny CFRH Institute, nilazany fa “ilain’ny HEC Paris tokoa ny hamantarana sy ampitahana ny fomba fiasan’ny orinasa samihafa, hanatsarana ny fikarakarana ny mpanjifa.
Tombana ho an’ny orinasa koa ny fandraisana anjara amin’ny fifaninanana, toy ny orinasa Samad. “Mampirisika anay hanao ny tsara kokoa ny toy izao”, hoy ny Asisten travel.
Ampolony maro ny orinasa mandray anjara amin’ity fifaninanana ity sy te hisongadina, misehatra amin’ny sokajim-pihariana samihafa. Manampy ireo voalaza etsy ambony, ny Red Company, ny OTI, ny Ivenco, ny orinasa triangle immobilier, ny Delta audit, ny Red blue, ny Ymagoo, ny Annick beauté, ny Airtel, ny Socolait, ny G4S Madagasikara, sns.